टोकियो ओलम्पिक २०२० का चर्चित १० घटना - Lumbini 24
Lumbini 24 आइतवार, साउन २४, २०७८
१. जापानकी १३ वर्षीया खेलाडीको स्वर्ण :
जापानकी १३ वर्षीया मोमिजी निशियाले महिला स्ट्रिट स्केटबोर्डिङमा स्वर्ण जितेर इतिहास बनाइन्। यो स्पर्धामा ब्राजिलकी रेस्सा लिलले रजत पदक जितिन्। उनी पनि १३ वर्षकै हुन्। कास्य पदक जापानकै १६ वर्षीया फुना नाकायामाले हात पारिन्।
पदक जित्ने तीन खेलाडीको औषत उमेर १४ वर्ष १९१ दिन रह्यो। शीर्ष तीन पदक जितेका खेलाडीको यो अहिलेसम्मके कम औषत उमेर हो।
स्केटबोर्डिङमा १३ वर्षकै उमेरमा स्वर्ण जिते पनि मोमिजी ओलम्पिकमा कम उमेरमा स्वर्ण जित्ने खेलाडी भने होइनन्।
ओलम्पिकमा कम उमेर स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान अमेरिकाकी मार्जोरि गेस्ट्रीङ हुन्। उनले १९३६ को बर्लिन औलम्पिकमा १३ वर्ष २६७ दिनको उमेरमा डाइभिङमा स्वर्ण जितेकी थिइन्। यो उमेर मोमिजीको भन्दा ६३ दिन कम हो।
२. ५७ वर्षको उमेरमा ओलम्पिक पदक :
कुवेतका सुटिङ खेलाडी अब्दुल्लाह अल रसिदीले सबैको ध्यान खिँचे। सुटिङको स्कीट विधामा कास्य जितेसँगै उनी चर्चामा आए। टोकियो ओलम्पिकमा उनी बढी उमेरमा पदक जितेर चर्चामा आएका अल रसिदीको उमेर ५७ वर्ष छ। अल रसिदीले ओलम्पिकमा दोस्रो पदक जितेका हुन्। उनले सन् २०१६ को रियो ‌ओलम्पिकमा व्यक्तिगत रूपमा ‌ओलम्पिकमा भाग लिएका थिए। किनभने त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय ‌ओलम्पिक कमिटीले कुवेतलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
रियो ‌ओलम्पिकमा पनि उनले कास्य पदक जितेका थिए। त्यतिबेला उनले फाइनलमा इंग्लिस फुटबल टिम आर्सनलको जर्सी लगाएर आउँदा विवाद भएको थियो। अल रसिदीले रियोअघि पाँच पटक ओलम्पिक खेलका थिए। पाँचै पटक पदक जित्न असफल भए पनि उनले हरेस खाएनन्। तर छैटौं पटक जब उनले पदक जिते, सो पदक देशको नाममा हुन सकेन। यसपटक ५७ वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो देशका लागि पदक जित्ने धोको पूरा गरे।
ओलम्पिकमा बढी उमेरमा पदक जित्ने कीर्तिमान स्विडेनका सुटिङ खेलाडी ओस्कार स्वानको नाममा छ। उनले सन् १९२० को ओलम्पिकमा ७२ वर्षको उमेरमा रजत पदक जितेका थिए।
३. इजरायलका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अस्वीकार गर्ने सुडानका खेलाडी प्रतिबन्धमा :
सुडानका एक खेलाडीले इजरायलका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अस्वीकार गरे। जुडो खेलाडी मोहम्मद अब्दुलरसुलले इजरायलका तोहार बत्बलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
अब्दुलरसुलले पहिलो राउन्डमा अल्जेरियाका खेलाडी फेतही नुरिनको सामना गर्दै थिए। तर दोस्रो चरणमा इजरायली खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना भएपछि उनले ओलम्पिकबाट आफ्नो नम फिर्ता लिएका थिए। अब्दुलरसुलले अल्जेरियाको मिडियासँग ओलम्पिकबाट नाम फिर्ता लिनुको कारणबारे भनेका थिए ‘हामीले यो प्रतियोगिताका लागि धेरै तयारी गरेका थियौं। तर यो भन्दा ठूलो प्यालेन्टाइनको मुद्दा हो।’
अफ्रिकन च्याम्पिनय अब्दुलरसुललाई त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले प्रतिबन्ध लगाउँदै घर फिर्ता पठाइदियो।
४. अमेरिकन स्टार बाइल्सले छोडिदिइन् फाइनल :
अमेरिकाकी जिम्न्यास्टिक खेलाडी सिमोन बाइल्सले समूह स्पर्धाको फाइनल प्रतिस्पर्धा खेल्नुअघि नाम फिर्ता लिइन्।
अमेरिकाका लागि उनी सबैभन्दा आसा गरिएकी खेलाडी थिइन्। उनले अघिल्लो ओलम्पिकमा चार स्वर्ण जितेकी थिइन्।
तर २४ वर्षीया बाइल्सले अमेरिकी महिला टिमको जिम्न्यास्टिकको फाइनल इभेन्ट खेल्नुअघि नाम फिर्ता लिएकी थिइन्। पछि उनले मानसिक स्वास्थ्यका कारण आफूले नाम फिर्ता लिएको स्पष्टिकरण दिएकी थिइन्।
५. बर्मुडा ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने सबैभन्दा सानो देश :
बर्मुडा ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो देश बन्यो। ६३ हजार जनसंख्या भएको बर्मुडाका लागि ‍फ्लोना डुफीले स्वर्ण जित्दै इतिहास बनाइन्। उनले ट्रायथलनको व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्न सफल भइन्।
चौथो पटक ओलम्पिकमा भाग लिएकी उनले ५६ महिला प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने क्रममा ५५ मिनेट ३६ सेकेन्डमा (पौडी,साइक्लिङ र दौड) निर्धारित दूरी पूरा गरिन्। बर्मुडाले यसअघि नै ‌ओलम्पिकमा पदक जित्ने सानो देशको कीर्तिमान बनाएको थियो। सन् १९७६ मा बर्मुडाले बक्सिङमा कास्य जितेको थियो। बक्सर क्लारेनस हिललले कास्य जितेर इतिहास बनाएका थिए।
डुफीले यसअघि सन् २०१८ को कमनवेल्थ गेम्समा स्वर्ण जितेर इतिहास बनाएकी थिइन्। उनी कमनवेल्थ गेम्समा स्वर्ण जित्ने बर्मुडाकी पहिलो खेलाडी बनेकी थिइन्। ओलम्पिक ट्रायथलमा ५१.५ किलोमिटर दूरी पार गर्नु पर्छ। जसमा १.५ किलोमिटर पौडी, ४० किलोमिटर साइक्लिङ र १० किलोमिटर दौड हुन्छ। डुफीले पार गरेको दूरी आफ्नो देशको लम्बाईभन्दा ११.५ किलोमिटर बढी हो। बर्मुडाको लम्बाइ ४० किलोमिटर छ। बर्मुडा अमेरिकाको न्युयोर्कभन्दा १५ गुणा सानो छ।
६. बेलारूसकी खेलाडीको विद्रोह :
ओलम्पिकमा सहभागी हुन गएकी बेलारूसकी एक जना खेलाडी भने पदकका कारण नभई राजनीतिक कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समाचार बनिन्। २४ वर्षीया क्रिस्टिना तिमानोभस्काया यसपालि पहिलो पटक ओलम्पिक खेल्न गएकी थिइन्। उनले महिलाहरूको १०० मिटरको दौडमा प्रतिष्पर्धा गरेकी थिइन्। सोमबार उनी दुई सय मिटरमा दौडिने तालिका थियो। यही बीचमा उनले आफूलाई रिले दौडमा पनि राखिएको जानकारी पाइन्। केही खेलाडीको एन्टीडोपिङ परीक्षण नगरेको भन्दै बेलारूसको ओलम्पिक कमिटीले उनलाई रिले दौडमा राखेको बतायो। आफू उक्त रिले दौडका लागि खेल्न नआएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसको विरोध गरिन्। उक्त विरोधपछि बिहान उनका प्रशिक्षक उनको कोठामा आए र सामान प्याक गर्न भने।
क्रिस्टिनालाई जबरजस्ती हानिदा विमानस्थलमा पुर्‍याइयो तर उनले जहाज चढ्न अस्वीकार गरिन् र जापानी प्रहरीसँग सहयोग मागिन्। बेलारूसका प्रमुख युरी मोइसेभिचले भने क्रिस्टिनाको शारिरीक र मानसिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर उनलाई फिर्ता पठाउन लागिएको बताए। क्रिस्टिनाले आफ्नो शारिरीक र मानसिक दुबै स्वास्थ्य ठीक रहेको बताइन्।
हानिदा विमानस्थलमा खिचिएको भिडिओमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) सँग सहयोग मागेकी देखिएको थियो। बेलारूस फर्किएपछि आफूलाई लुकासेन्को सरकारले जेल हालिदिने भन्दै क्रिस्टिनाले विदेशी मुलुकसँग शरण मागिन्। त्यसपछि उनलाई पोल्यान्डले शरण दिएको थियो।
७. चिनियाँ खेलाडीको तस्बिरले तरंग :
चिनियाँ खेलाडी होउ झिहुईले टोकियो ओलम्पिकमा भारोत्तोलनतर्फ ४९ किलोग्राम तर्फको प्रतिष्पर्धामा स्वर्ण पदक जितिन्। बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले छापेको होउको तस्बिरले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ मात्र होइन सरकारी अधिकारीहरूमा पनि तरंग ल्यायो र आक्रोशित बनायो।
रोयटर्सले समाचारसँगै आफ्नो ट्वीटरमा राखेको उक्त तस्बिरले खेलाडी र चीनलाई होच्याएको अर्थमा धेरैले बुझे। उक्त तस्बिरमा होउले भार उचालिरहेकी छन्। जसले गर्दा उनको अनुहारको भावभंगी फरक देखिएको छ। जुन स्वभाविक हो। चिनियाँहरूले भने रोयटर्सले जानीजानी यस्तो तस्बिर प्रयोग गरेको बताए।
श्रीलंकास्थित चिनियाँ राजदूतावासले त ट्विटरमार्फत् रोयटर्समाथि प्रश्न गर्‍यो- खेलमा भएका सबै तस्बिरबाट रोयर्टसले यो तस्बिर छान्यो यसले उनीहरू कति कुरूप छन् भन्नेमात्र देखाउँछ। खेलभन्दा माथि राजनीति र विचारधारालाई नराख र आफूलाई निष्पक्ष मिडिया नभन। निर्लज्ज। ओलम्पिकको भावनाको सम्मान गर। चीनको सामाजिक सञ्जाल वेइबोका प्रयोगकर्ताले पनि उक्त तस्बिर प्रयोग गरेकोमा रोयटर्सप्रति आक्रोश पोखे। यसबारे ग्लोबल टाइम्सले पनि समाचार प्रकाशित गर्‍यो।
८. आफ्नो देशको नाम र झण्डा प्रयोग गर्न पाएनन् रूसका खेलाडीले :
टोकियो ओलम्पिकमा रूसका ३३५ खेलाडी सहभागी भए। तर, अरू देशका खेलाडी जस्तै उनीहरूलाई आफ्नो देशको नाम, झण्डा र राष्ट्रिय गानको उपयोग गर्ने अनुमति पाएनन्। सबै खेलाडी रसियन ओलम्पिक कमिटी अर्थात् आरओसीको झण्डामा टोकियो ओलम्पिक खेले। उनीहरूले जितेको पदक पनि टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा आरओसीको नाममा रह्यो। जसको झण्डा रुसको भन्दा अलग छ।
टोकियो ओलम्पिकमा आरओसीको झण्डामा ७१ पदक भित्रियो। जसमा २० स्वर्ण, २८ रजत र २३ कास्य समावेश छन्। आरओसी पदक तालिकामा अमेरिका, चीन, जापान र ब्रिटेनपछि पाँचौ स्थानमा रह्यो। यसअघिका ओलम्पिकमा रूस पदक तालिकामा माथिल्लो स्थानमा रहने गर्थ्यो। क्षेत्रफलको हिसाबमा संसारको सबैभन्दा ठूलो देश रूस २०१६ को रियो ‌ओलम्पिकमा ५६ पदक जित्दै पदक तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको थियो।
सन् २०१९ मा वर्ल्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) ले रुसलाई टोकियो ओलम्पिक २०२० र फिफा विश्वकप २०२२ गरी सबै प्रमुख प्रतियोगितामा भाग लिन चार वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् २०२० मा यो निर्णयको विरुद्ध कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्समा रूसले अपील गरेको थियो। अपीलपछि प्रतिबन्ध घटाएर दुई वर्षमा झारिएको थियो। त्यसपछि यो प्रतिबन्ध डिसेम्बर २०२२ सम्म कायम रहने भएको थियो।
९. दक्षिण एसियामा पदक जित्ने भारत एक्लो :
टोकियो ओलम्पकिमा सहभागी दक्षिण एसियाका भारतबाहेक अन्य देशले पदक जित्न सकेनन्।भारतले भने १ स्वर्ण, २ रजत र ४ कास्य गरी ७ पदक जित्न सफल भयो।
भारतले पुरूष ज्याभलिन थ्रोमा स्वर्ण जित्यो। भारतका नीरज चोपडाले शनिबार स्वर्ण जिते। यसअघि भारतका कुनै पनि एथलेटिक्स खेलाडीले ओलम्पिकमा पदक जित्न सकेका थिएनन्। उनी ओलम्पिकमा भारतका लागि स्वर्ण जित्ने दोस्रो खेलाडी हुन्।
यसअघि बेइजिङ ओलम्पिक २००८ मा सुटिङ खेलाडी अभिनव बिन्द्राले भारतका लागि १० मिटर एयर राइफलमा स्वर्ण जितेका थिए।
१०. अन्तिममा अमेरिकाले उछिन्यो चीनलाई :
टोकियो ओलम्पिकको अधिकांस दिन चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रह्यो। तर अन्तिम दिन अमेरिकाले चीनलाई पछि पार्दै पदक तालिकामा शीर्ष बन्न सफल भयो।
अमेरिकाले टोकियो ओलम्पिक ३९ स्वर्ण, ४१ रजत र ३३ कास्य गरी कुल ११३ पदक जित्यो। अन्तिम दिन दोस्रो स्थानमा झरेको चीनले ३८ स्वर्ण, ३२ रजत र १८ कास्य गरी जम्मा ८८ पदक हात पार्‍यो।
तेस्रो स्थानको आयोजक जापानले २७ स्वर्ण, १४ रजत र १७ कास्य गरी जम्मा ५८ पदक हात पार्‍यो।ब्रिटेनले २२ स्वर्ण, २१ रजत र २२ कास्य गरी ६५ पदक जित्यो भने पाँचौ स्थानको रसियन ओलम्पिक कमिटीले २० स्वर्ण, २८ रजत र २३ कास्य गरी ७१ पदक जित्न सफल भयो। छैटौं स्थानको अस्ट्रेलियाले १७ स्वर्ण जित्दा नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले १०-१० स्वर्णपदक जिते।
चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्दा मोबाइल पड्कियाे, किशोरीको मृत्यु